भारतीय सुरक्षाबलको ता’ण्डब – नेपालीलाई आफ्नै जमिनमा खेति गर्न रोक ।(भिडियो सहित) – Yuwa Aawaj
जेठ २६, २०७८ बुधबार 267
कञ्चनपुर : फसल नेपाली किसानको खेतबारीमा फल्छ । उनीहरुले त्यो खेतबारीको कुत, तिरो र राजश्व मालपोत कार्यालयमा बुझाउछन् ।
तर भारतीय सुरक्षाकर्मी बुट बजार्दै आएर राइफल देखाएर सोध्छ, भारतीय भूमिमा खेति गर्ने अधिकार कहाँबाट पाइस ? यो नियति सीमामा बस्ने धेरै नेपालीहरुले भोग्दै आएको पीडा हो ।
हरेक पटक थि’चोमि’चो र अन्या’य भोग्दै आएका कञ्चनपुरका सीमा’वर्ती वासि’न्दाले फेरि उही नियति भोग्न थालेका छन् । नेपाली भूमिमा लगाएको फसल उठाउन पाउँदैनन्, बरु कु’हिएर जान्छ तर भारतीय सुरक्षाकर्मीले फसल लगाएको बालीमा जाँदा राईफलको प’र्खाल तेस्र्या’एर हरेक पटक अव’रोध गर्दै आएको छ ।
राज्यको उपस्थिति सीमामा कम’जोर बन्दा र कुनै पनि कुटनैतिक पहल नहुँदा सीमा’वासी नेपाली नागरिकले सास्ती भोग्ने क्रम जारी छ ।
भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालीहरु माथि निर्ल’ज्जताका साथ दमन गर्दै आएपनि बोलिदिने निकाय ग’म्भीर नबन्दा अवस्था झनै अत्यास लाग्दो बन्दै आएको छ ।
त्यसमाथि भारतीय सीमा सुरक्षा बलसंग बढी बोल्ने नेपाली नागरिकको फोटो खिचेर राख्न र पछि उठाएर भारत ल्याएर हिरासतमा राख्नु पर्नेसम्मको ध’म्की पनि सुर’क्षाबलका उच्च अधिकारीहरुले दिने गरेका छन् । त्यो जमिनको राजश्व बुझ्ने नेपाल सरकारले केही नबो¥लिदिदा सीमामा एसएसबीको ज्यादति झनै बढेको छ ।
२०७३ साल फागुन २७ गते कञ्चनपुरमा सी’मावर्ती नेपाली नागरिक गोविन्द गौतम भारतीय सुरक्षाकर्मीको गो” ली लागेर कहिल्यै नउठने गरि ढले । राज्यले उस्लाई शहीद घो’षणा ग¥यो र उनको परिवारलाई क्ष’तिपूर्ति’वापत दश लाख रुपैयाँ दियो । बस, श’हीद भए गोविन्द ।
तर सरकारको अकर्मन्य’ताका कारण धेरै गोविन्दहरुले अझै पनि सीमामा सास्ती पाउँदै आएका छन् । नेपालले कुटनीतिक तवर’बाट अडा’नका साथ गौतम प्रक’रणको घट’नालाई भारतीय पक्षसंग राखेको भए सीमामा नेपाली नागरिकले भोग्दै आएको नियति दोहो’रिदैन थियो होला शायद ।
Prev“वैगुनीलाई गुन गर्नुपर्छ” ज्ञानेन्द्र शाही ! (भिडियो हेर्नु-होस् )
Nextहरियो प्याजले निको पार्छ यस्ता रोगहरु, जसकाे बारेमा धेरैलाई थाहै नहुनसक्छ !(जानीराख्नुहोस)